Karịa 50 ụdị nke ngụkọta oge. Ngụkọta oge nke warara ntọala, nke nke ntụhie ya, osisi steepụ. Ụlọ mgbako.
Mgbawa nke ụlọ ihe, na-ewu calculators, na ndị na-emepụta
Fences, mgbidi, ala
Mpịakọta na ikike
Ịchụso owuwu nke a etiti ụlọ m mgbe nile ihu na ngụkọta oge nke ego nke ụlọ Akụrụngwa ma ọ bụ ngụkọta oge nke size nke otu imewe nkọwa.
Ịcha osisi, osisi ma ọ bụ ndị ọzọ na osisi maka ewu ọrụ - dị ka achọrọ maka mgbidi ma ọ bụ ala?
Heaters na-achọ mgbe nile ngụkọta oge. A ga-ịnweta ajị, ụfụfụ ma ọ bụ ndị ọzọ na mkpuchi. Dị ka m dere, imewe nke ụlọ m ọkpụkpụ na mkpuchi ihe m na-eji maka mkpuchi, ọ bụghị nanị n'ala na ụlọ, na mgbidi ya.
Roofing - ọzọ akụkọ. The n'elu ụlọ nke ụlọ m mgbagwoju shapes, gbakọọ ego nke metal shingles ma ọ bụ ndị ọzọ na roofing ihe siri ike. Ma anyị ga-n'ime akaụntụ n'efu na roofing. Ma e nwere ụlọ ruo ọtụtụ afọ na a n'elu ụlọ nke roofing ihe onwunwe.
Ihe na-esonụ oge, na-na mkpa mgbidi. Ọzọkwa weere onwe ya siding, vepo mgbochi ...
A onye maara na akwụkwọ algebra N'ezie, ndị a calculations ga-ike. Were mpempe akwụkwọ na a mgbako, cheta usoro, lelee a di na nwunye nke ugboro ... Na-elele si ... Na mgbawa na-adịghị hie ụzọ ejirila nwayọọ nwayọọ malite jupụtara na-enweghị isi na-akwụ ụgwọ. Ụgbọ njem, ma ọ bụrụ na i nwere ihe ịzụta ihe, ma ọ bụ Anglịkan na ukwuu, mfe ọrụ adịchaghị mma, na na.
Ya mere a mụrụ echiche na-agafe ndị a na-eme mgbawa ndị dị n'ubu ndị omume na onye ọ bụla ga-atụle ma na-abịaru a esereese.
Ọtụtụ ihe - anaghị-eme mmehie! Mgbe niile, na-eri nke odida dị elu n'oge na-ewu.
M olileanya na m ozi m ga-enyere ndị na-ewu ụlọ ya aka na nkà-ewu ụlọ.